चितवनमा फेरी शक्तिशाली बिस्फोट,एक जना घाइते, के भन्छ प्रहरी ? — Sanchar Kendra
चितवनमा फेरी शक्तिशाली बिस्फोट,एक जना घाइते, के भन्छ प्रहरी ?
काठमाडौँ । चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने पम्फा खोलामा फेरी अर्को ब’म बिस्फोट भएको छ । दिउसो १ बजे तिर भएको ब’म बिस्फोट परि १ जना घाईते भएका छन् । स्थानीय राजन सिल्वालले शंकास्पद बस्तु देखेपछि के रहेछ भनेर हेर्ने क्रममा बम बिस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनका प्रबक्ता एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिए । कोईरालाका अनुसार चितवनमा आज नेकपाको बन्दको घोषणा गरेको छ । विप्लब नेतृत्वको नेकपाले सोमबार (आज)आब्हान गरेको चितवन बन्दको पूर्वसन्ध्यामा विस्फोट गराएको हुनसक्ने प्रहरी अनुमान छ । जिल्लाको राप्ती नगरपालिका ओहोलेवाङमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनिरहेकाे प्रतिक्षालय भत्काएर ओली सरकारका केही एजेन्ट र प्रहरी, कथित भ्रष्ट जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा आगजनी गरेको भन्दै नेकपा चितवनले त्यसको बिरोधमा आज बन्द आह्वान गरेको हो ।